Internetka Waxyaabaha Ayaa Door Weyn Ku Lahaan Doona Safarka Musiibada Ka Dib | Teknolojiyada Safarka
Bogga ugu weyn » Wararka Teknolojiyada Safarka » Internetka Waxyaabaha Ayaa Door Weyn Ku Lahaan Doona Safarka Musiibada Kadib
Qalabka tikniyoolajiyadda ee la gashado ee garoomada diyaaradaha iyo boosteejooyinka kale ee gaadiidka ayaa u oggolaan kara dadka socotada ah inay ku celceliyaan hababka kala fogaynta bulshada isla markaana ay u ilaaliyaan tilmaamaha kale ee u hoggaansamida caafimaadka iyo caafimaadka, taas oo horseedeysa faafitaanka COVID-19 isla markaana dadka safarka ah ka dhigaysa inay dareemaan nabadgelyo.
Codsiyada isku xiran waxay ka dhigi karaan qulqulka dalxiiska mid aamin ah dhammaan magaalooyinka caqliga badan ama halka loo socdo, adoo siinaya digniino waqtiga-dhabta ah oo ku saabsan isku soo-buuxa.
Codsiyada isku xiran waxay sidoo kale fududeyn karaan cabsida meelaha gaarka loo leeyahay.
Mid ka mid ah sababaha ugu waawayn ee waaxda safarka iyo dalxiiska oo aad uga gaabiya soo kabashadeeda ayaa ah cabsida caafimaad iyo nabadgelyo ee ka dhex jirta macaamiisha.
Tikniyoolajiyadda Internetka Waxyaabaha (IoT) waxay gacan ka geysan kartaa yareynta welwelka dadka safarka ah ee la xiriira caafimaadka shaqsiyeed iyo ladnaanta, iyadoo u oggolaaneysa shirkadaha socdaalka iyo dalxiiska inay soo ururiyaan xog fara badan oo loogu talagalay faa'iidooyin badan oo gudaha iyo dibaddaba ah. Khubarada warshadaha ayaa xusaya in tikniyoolajiyaddani ay yeelan doonto door weyn oo ay ka ciyaari doonto safarka safarka kadib.
Warbixintii ugu dambeysay ee mawduucan ahayd, 'IoT ee Safarka & Dalxiiska', waxay sheegaysaa in aaladaha teknolojiyadda la gashado ee garoomada diyaaradaha iyo boosteejooyinka kale ee gaadiidka laga qaadi karo ay u oggolaan karaan dadka safarka ah inay ku tababaraan nidaamyada kala fogaynta bulshada isla markaana ay u ilaaliyaan tilmaamaha kale ee u hoggaansanaanta caafimaadka iyo nabadgelyada, taas oo horseedaysa faafitaanka Covid-19 wuxuuna socdaalka ku hayaa inay dareemaan amaan.
Codsiyada isku xiran waxay ka dhigi karaan qulqulka dalxiiska mid aamin ah dhammaan magaalooyinka caqliga badan ama halka loo socdo, adoo siinaya digniino waqtiga-dhabta ah oo ku saabsan isku soo-buuxa. Digniintaan waxaa loo diri karaa aaladda moobiilka ee socotada iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyadda laydhka, iyada oo lagula talin karo in ay qaadaan waddo kale, taas oo yaraysa halista fayrasku ku soo ururayo inta lagu jiro biririfta magaalada.
Codsiyada isku xiran waxay sidoo kale fududeyn karaan cabsida meelaha gaarka loo leeyahay. Tusaale ahaan, HiltonTiknoolajiyada 'Isku Xidhnaanta' ayaa u oggolaanaysa martida inay adeegsadaan barnaamijka 'Hilton Honors' si ay u maareeyaan inta badan waxyaabaha ay dhaqan ahaan ahaan lahaayeen inay ku sameeyaan gacanta qolka martida. Laga bilaabo xakamaynta heerkulka iyo iftiiminta TV-ga iyo daaqadaha, teknolojiyadda 'IoT' waxay u oggolaaneysaa martida inay yareeyaan tirada jeer ee ay tahay inay taabtaan sagxadaha laga yaabo inay sumeysan yihiin.
COVID-19 wuxuu yareeyay safarkii iyo dalxiiskii. Mid ka mid ah sababaha ugu waawayn ee waaxdu ugu gaabisay soo-kabashadeeda ayaa ah cabsida caafimaad iyo nabadgelyo ee ka dhex jirta macaamiisha, taas oo ay xoojisay dawladaha. Sida laga soo xigtay khubarada warshadaha, 85% macaamiisha ayaa wali 'aad u' badan, 'aad u yar' ama 'wax yar' ka walwalsan caafimaadkooda cudurka faafa.